रोचक Archives - Page2of 31 - Recent Nepal News
तत्कालका लागि टर्‍यो हिरोसिमाको भन्दा ठूलो भयावह
एजेन्सी – पृथ्वीमा हुनसक्ने भयावह तत्कालका लागि टरेको छ । वैज्ञानिकहरु अनुसार आईफल टावर भन्दा पनि ठूलो एउटा क्षुद्रग्रह अर्थात् आकाशीय पिण्ड पृथ्वी नजिकैबाट गएको छ । यद्यपि उक्त पिण्डको भिडियो फूटेज संकलन गर्न भ्याएका छन् । वैज्ञानिकहरुका अनुसार यदी उक्त पिण्ड पृथ्वीमा ठोक्किएको भए जापानको हिरोसिमा र नागासाकीको भन्दा पनि ठूलो क्षति हुने थियो । २००६ मा पत्ता लगाइएको यो क्षुद्रग्रह यही साता पृथ्व...
टिकटक भिडियो बनाउनको लागि बाढीमा हामफाल्दा एक युवाको मृत्यु
काठमाडौं - एक युवकको टिकटक भिडियो बनाउनको लागि बाढीमा हामफाल्दा डुबेर ज्यान गएको छ । बाढी हेर्नको लागि नदिमा पुगेको एक युवाको बाढीमा हामफाल्दा डुबेर मृत्यु भएको हो । भारतको बिहारमा तीन दिन पहिले घटेको घटना भएपनि उनको शव बिहिबार मात्र भेटिएको छ । तीन साथीहरु मिलेर बाढी हेर्नको लागि भन्दै लाला चौर गाउँ पुगे । गाउँ पुगेका उनीहरु मोबाइलबाट तस्बिर खिच्न थाले । तस्बिरले मात्र चित्त नबुझेपछि उनीरु टिक...
प्रयोग भएको ८० हजार टन ग्याजेटबाट जापानले बनायो २०२० टोक्यो अोलम्पिक्सको लागि मेडल
जापानको टोक्योमा सन् २०२० मा अोलम्पिक र प्यारालिम्पिक प्रतियोगिता हुंदैछ । सो प्रतियोगिता हुन अझै १ वर्ष लाग्ने भएतापनि जापानले भने समय खेर नफाली प्रतियोगीलाई वितरण गरिने मेडल भने तयार पारिसकेको छ । टोक्यो २०२० को लागि स्वर्ण, रजत र कास्य पदक तयार पार्न ७८,९८५ टन रिसाईकल गरिएको विधुतीय सामाग्रीबाट तयार पारेेेेको छ जसमा करीब ६० लाख २१ हजार मोबाईल फोन पनि समावेश छ । टोक्यो २०२० ले बताए अनुसार ...
आफैंले बनाएको औषधि खादाँ एक जना चिकित्सकको मृत्यु
काठमाडौं - आफैंले बनाएको औषधि खादाँ एक जना चिकित्सकको मृत्यु भएको छ । चीनको दक्षिणपूर्वी भागमा रहेको शाओगुआनमा एक झोले चिकित्सकको आफ्नै घरेलु औषधि खाएपछि मृत्यु भएको हो । रोगीसमक्ष आफ्नो परम्परागत औषधि ठीक भएको भनी प्रमाणित गर्न उनले औषधि खाएका थिए । ढाडको समस्या भएर अघिल्लो बिहीवार झोले चिकित्सककहाँ पुगेकी एक महिलालाई उनले औषधि दिएका थिए । त्यो औषधि खाएपछि उनलाई वाकवाक लागेको थियो । उक्त औष...
एजेन्सी - एउटा परेवाको मूल्य १५ करोड रुपैयाँ पर्छ भन्दा तपाईंलाई पत्यार नलाग्न सक्छ तर, वास्तविकता यस्तै छ । हाम्रो टोलछिमेकमा सामान्यतया एकजोडी परेवाको ५ सय देखि १ हजार रुपैयाँ सम्म किनबेच हुन्छ । तर, युरोपको बेल्जियममा एउटै परेवाको मूल्य साढे १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी परेको छ । बीबीसीको समाचार अनुसार, अर्मान्डो नाम दिईएको एउटा परेवा १.२५ मिलियन यूरो अर्थात नेपाली रुपैयाँ १५ करोड, ५६ लाख ३० हजा...
एक बोतल पानीको मूल्य १ करोड !
एजेन्सी- अमेरिकाको एउटा कम्पनीले उत्पादन गरेको पानीको मूल्य एक करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । करोड मूल्य पर्ने यो पानीको बोतल पाउन सजिलो भने छैन । पानी किन्नका लागि पहिले कम्पनीसँग अर्डर गर्नुपर्दछ । त्यसपछि बल्ल कम्पनिले पानी उत्पादन गर्छ । र क्रेतालाई उपलब्ध गराउँछ । यो पानी खानका लागि भने होइन, लक्जरी कलेक्सनका लागि हो । यो पानीको बोतलको बिर्को नै सुनबाट बनाइएको हुन्छ । जसमा १४ क्यारेटका ६ सय वटा से...
हावाबाट चल्ने बाइक बन्यो : ५ रुपैयाँमा ४० किलोमिटर यात्रा !
एजेन्सी – ट्यांकीमा पेट्रोल होइन हावा भरेर हावाबाटै चल्न बाइकको आविष्कार गरिएको छ । भारत लखनउका एक वैज्ञानिकले एअर बाइकको आविष्कार गरेका हुन् । उनले करिब ९ वर्षपहिला एउटा एअर इन्जनको आविष्कार गरेका थिए । जुन अहिले आएर एअर बाइकको रुप लिएको छ । यो आविष्कारले बढ्दो ग्लोबल वार्मिङ समस्यासँगै आम मानिसको कम खर्चमा बाइक चढ्ने रहर पूरा गर्ने विश्वास गरिएको छ । एअर बाइक तयार गर्ने वैज्ञानिकको विश्वास छ कि...
दाइजो मागेर सताएको भन्दै ज्वाईँलाई रुखमा बाँधेर कुटपिट
काठमाडौं – ज्वाईँले दाइजो मागेर सताएको भन्दै ससुराली पक्षले रुखमा बाँधेर कुटपिट गरेका छन् । भारतको बिहारस्थ्ति मुजफ्फरपुर गाउँमा सुमेराका अवधेश कुमारलाई उनको सुसुराली परिवारले गाउँलेको सहयोगमा रुखमा बाँधेर कुटपिट गरेका हुन् । अवधेशले दाइजोको नाममा सधैँ छोरीलाई कुटपिट गर्ने गरेको आरोप उक्त परिवारको छ । यसबारेमा थुप्रै पटक गाउँ पञ्चायतमा कुरा उठे पनि ज्वाईँले बानी नसुधारेकोले कुटपिट गरेको ससूराले...
विमानभित्र निदाएकी महिला छुटेपछि….
एजेन्सी- एक महिलाले आफू चढेर आएको एअर क्यानडाको विमानमा आफूलाई एक्लै छोडिएको बताएकी छन्। उडानका बेला निदाएकी उनलाई विमान अवतरण गरेपछि कसैले पनि बिउँझाएन। गत जुन ९ मा टिफनी एडम्स नाम गरेकी ती महिला क्युबेकबाट टोरन्टो जान विमान चढेकी थिइन्। उडानका बेला उनी निदाइन् र बिउँझिदा सीटमा पेटी बाँधेकै अवस्थामा थिइन्। विमानस्थलमा पार्क गरिएको विमानभित्र कठ्याङ्ग्रिने जाडो थियो र बाहिर निस्पट्ट अन्धका...
रेष्टुरेन्टमा मोवाइल नचलाउनेलाई फ्रि मा पिज्जा,कसले पाउँछन् यो अफर ?
एजेन्सी – क्यालिफोर्नियास्थित द करी पिज्जा नामक रेष्टुरेन्टले यस्तो अफर ल्याएको हो । उक्त रेष्टुरेन्टमा आउने ग्राहकले यदि आफ्नो मोबाइल लकरमा राखेमा उनीहरुले सित्तैमा पिज्जा खान पाउनेछन् । मानिसमा मोवाइल फोनको लत हटाउने उद्देयकले क्यालिफोर्नियाको एक रेष्टुरेन्टले फ्रि मा पिज्जा दिने अफर ल्याएको हो। यसको लागि रेष्टुरेन्टमा आउने सबै ग्राकहरुले आफ्नो मोवाइल फोन रेष्टुरेन्ट कै लकरमा राख्नुपर्ने हुन्छ।...